“RAIISAL-WASAARRE KHEYRE WAXAANNU U CADDAYNAYNAA INAAN BOOS DILAALNIMO UGA BANNAANAYN
” XISBIGA UCID | Saxil News Network
” XISBIGA UCID
Hargaysa(saxilnews.com):-Xisbiga Caddaalada iyo Daryeelka ee UCID ayaa War-murtiyeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in jamhuuriyadda madaxa-bannaan ee Somaliland ay ku guulaysatay mid ka mida Qorshayaasheeddii ugu muhiimsannaa, kaasoo ay ku tilmaameen inay si toos ah ula Macaamisho dalalka Caalamka.
Xisbiga mucaaridka ah ee UCID waxa uu sheegay in hadalkii shalay ee Ra’iisal-wasaarre Kheyrre uu muujinnaayo Caddaawadda iyo Naxliga Xukuumadda itaalka yar ee Muqdisho, waxaannay sheegeen in hadalka Mr. Kheyrre uu Ka soo horjeeddo Qaddiyadda madax-bannaanida jamhuuriyadda Somaliland, iyagoo u sheegay inaan jaannis dilaalnimo uga bannaanayn heshiisyadda Horumarrinneed ee ay Xukuumadda Somaliland galayso.
Warsaxaafaddeedkaas oo uu
ku saxeexan yahay Guddoomiyaha Xisbiga Caddaalada iyo Daryeelka ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, waxa uu u dhignaa sidan
“Xisbiga Caddaalada Iyo Daryeelka UCID, Waxaa uu soo dhawaynayaa heshiiskii saddex geesood-ka ahaa ee 1-dii March 2018-ka, ku dhex maray Dalka Imaaraadka Carabta, Wadamada Somaliland, Ethopia iyo shirkadda DP World.
Heshiiskan ayaa noqday mid ay somaliland ku gaadhay hamigeedi ahaa in ay dunida si toos ah ula macaamisho, sidoo kalena waxaa uu heshiiskani muujiyay in ay somaliland tahay qaran la isku halayn-karo amaankiisa iyo shuruucdiisaba, galina-kara heshiisyo waa-waayn oo masiiri ah.
Haddaba, Heshiiskani waxaa uu bar-bilaw fiican u yahay in shacabka reer Somaliland ka faa’idaystaan khayraad-kooda dabiiciga ah iyo mawqica istaaraatijiga ah ee uu ilaahay dhigay.
Xisbiga UCID waxa uu cambaaraynayaa hadalkii shalay ka soo yeedhay Raysal Wasaaraha Somalia ee ku aaddanaa heshiiska Dekedda Berbera. Xisbiga UCID waxaa uu arkaa Hadalka Raysal Wasaaraha in uu ka soo hor jeedo jiritaanka iyo madax-banaanida Somaliland, sidoo kalena waxa uu si toos ah uga hor imanaya heshiisyadii ay hore u kala saxeexdeen dawladaha Somaliland iyo Somalia.